जब दाजु नै बहिनीको लागि सेक्स टोय चाहियो भन्दै काठमाडौँको सेक्स टोय पसलमा पुगेपछि ! – Medianp
जब दाजु नै बहिनीको लागि सेक्स टोय चाहियो भन्दै काठमाडौँको सेक्स टोय पसलमा पुगेपछि !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २६, २०७५१२:१९
काठमाडाैं : यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक बुझाइ हुन सक्छ । तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ ।
करिब चार महिनाअघिको कुरा हो । धनगढीकी सुविना (नाम परिवर्तन) ले काठमाडौंस्थित सेक्स टोय (यौन खेलौना) पसलमा फोन गरिन् र भनिन्, ‘तपाईंलाई मेरो श्रीमान्ले केही भन्नुभएको थियो ?’ सुविनाले फोन गरेको अघिल्लो दिन उनका श्रीमान्ले पसल मालिकलाई फोन गरेका थिए । जो स्पेनमा बस्दै आएका थिए । उनले जिज्ञासा राखेका थिए, ‘त्यहाँ कस्ता खालका सेक्स टोय पाइन्छ ? मेरी श्रीमतीलाई पनि चाहिएको थियो ।’ पसलेले सम्पूर्ण जानकारी दिए । सो जानकारी श्रीमान्ले सुविनालाई सेयर गरेका थिए ।
सुविनाले सबै जानकारी पाइसकेपछि सेक्स टोय झिकाइन् । त्यसको एक हप्तापछि उनी काठमाडौंकै सेक्स टोय पसलमा आइन् । दुई दिनको यात्रा गरेर उनी सेक्स टोय खरिद गर्न काठमाडौंसम्म आइन् । ६ हजार रुपैयाँमा किनेको उक्त सेक्स टोय सुविनालाई सानो भएपछि अलि ठूलो आकारको टोय लगिन् ।
करिब आठ वर्षपहिलेको कुरा हो । रामेछापबाट एकजना पुरुष सुन्धारास्थित सेक्स टोय पसलमा आए । उनले पसलेलाई भने, ‘मेरो बहिनीका लागि सेक्स टोय चाहियो ।’ पसले दंग खाए । ती पुरुष बहिनीका लागि सेक्स टोय खरिद गर्न आउनुको कारणचाहिँ बडो दर्दनाक थियो ।
उनका ज्वाइँ सशस्त्र द्वन्द्वका वेला मारिएका थिए । बहिनी समीक्षा (नाम परिवर्तन) का दुई सन्तान थिए । घरमा अपहेलित भएपछि उनी माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् ।
त्यसपछि समीक्षाका दाइ काठमाडौं आएर सेक्स टोय खरिद गरे । ३५ सय रुपैयाँको सेक्स टोय खरिद गर्नका लागि पाँस सय रुपैयाँ पुगेन । तर, पछि ल्याइदिनु भन्दै पसलेले उपलब्ध गराए ।
त्यसको तीन महिनामा पाँच सय रुपैयाँ बोकेर उनी त्यहाँ आइपुगे । उनको मुख हँसिलो थियो । भने, ‘मैले वर्षौंदेखि औषधि गर्दा पनि केही सुधार भएको थिएन, अहिले पूर्ण रूपमा निको भयो । तपाईंलाई धन्यवाद ।’
एकपटक ह्विलचेयरमा बसेर एक अधबैँसे दम्पती कन्डम हाउस पुगे । उनीहरूले पसलेसँग आफ्नो समस्या बताए । केहीबेरपछि श्रीमान्ले भने, ‘मलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको ५–६ वर्ष भइसक्यो । यदि रुचि भए अरूसँग सेक्स गर्दा हुन्छ भनेर पनि मैले पटक–पटक भने । तर, उसले मानिनँ । बिहे गरभन्दा पनि मान्दिनँ । एउटा राम्रो खालको सेक्स टोय दिनुपर्‍यो ।’
जब ८५ वर्षका वृद्ध सेक्स टोय खरिद गर्न पुगेः
श्रीमतीलाई सेक्स टोय उपहारः
केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ । दिनमा औसत १५ सयले रोजगारीका लागि देश छाड्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीमती छाडेर जानेहरूले श्रीमतीलाई सेक्स टोय गिफ्ट दिने प्रचलन पनि बढ्न थालेको छ ।
मेरो सपिङका सञ्चालक भन्छन्, ‘रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूका श्रीमतीहरूले पनि सेक्स टोय खरिद गर्ने गर्दछन् ।
कतिपयले विदेशबाटै आफ्ना श्रीमतीलाई सेक्स टोय पुर्‍याइदिन आग्रह गर्दछन् भने कतिले विदेश जानुपूर्व गिफ्ट दिन्छन् ।’ उनका अनुसार मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्यले अत्यधिक मात्रामा सेक्स टोय प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भन्छन्, ‘सम्पन्न मान्छेले त पैसाले जे पनि खरिद गर्न सक्छन् । तर, मध्यमवर्गीयका लागि असम्भव हुन्छ । अत्यधिक मध्यमवर्गीय परिवारले सेक्स टोयको प्रयोग गर्दछन् ।’
सेक्स टोयको प्रयोगकर्ता नेता र कलाकार पनिः
श्रीमान्–श्रीमतीमै सेक्स टोय मोहः
कति हुन्छ खपत, कस्ता हुन्छन् सेक्स टोयः
काठमाडौंमा दैनिक औसत ८/९ वटाको दरले सेक्स टोयको व्यापार हुने गरेको छ । व्यवसायी भने सेक्स टोयको उत्साहप्रद व्यापारचाहिँ नभएको बताउँछन् । तीनदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको सेक्स टोय अत्यधिक बिक्री हुने व्यवसायी बताउँछन् । देशभर भने नौवटाभन्दा बढी सेक्स टोयका पसल छन् । स्वचालित पेनिसदेखि स्तन, भेजिना मसाजरको सामग्रीलगायतका यौन सामग्री नेपालमा उपलब्ध छ । काठमाडौंमा पछिल्लो समय फुल बडीको सेक्स टोय उपलब्ध नभए पनि पोखरामा भने उपलब्ध छ । युवराज भन्छन्, ‘हामीले सबै प्रकारका सेक्स टोय राखेका थियौँ । तर, त्यस्ता प्रकृतिको सेक्स टोय बिक्री नभएपछि अहिले हामीकहाँ छैन ।’ काठमाडौंमा ११ सयदेखि १२–१३ हजार मूल्यसम्मका सेक्स खेलौना उपलब्ध छन् ।
अनलाइनबाट पनि किनमेलः
सेक्स टोयको इतिहासः
सेक्स टोयलाई अहिले पनि सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिँदै आएको छ । यस विषयमा खुलेर बहस गर्ने परिस्थिति अझै पनि निर्माण भइसकेको पाइँदैन । तर, सेक्स टोयको इतिहास भने जोकोहीको सोचाइसँग मेल नखान सक्छ । प्राचीन समयमा पनि विभिन्न प्रकारका यौनोत्तेजक तथा कृत्रिम यौन सामग्री (सेक्स टोय) को प्रयोग हुने गरेको पाइएको थियो । प्राचीन रोम तथा ग्रिस सभ्यतामा सेक्स टोयका रूपमा विभिन्न सामग्री प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा सेक्स टोयको निर्माण तथा प्रयोगले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । आधुनिक सेक्स टोय निर्माण हुन थालेको पनि यही समयबाट नै हो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा सेक्स टोय विद्युतीय उपकरण बन्न पुग्यो ।
इसापूर्व ६००० तिर महिला तथा पुरुषका यौनांगमा अलौकिक शक्ति हुने गरेको विश्वास गरिन्थ्यो । सो समयभन्दा पहिले नै पनि निर्माण गरिएका पुरुषको यौनांगकै रूप दिइएका सामग्री टर्कीमा पाइएका छन् । प्राचीन समयका सेक्स टोय निकै कडा र प्रयोग गर्दा असुविधा हुने भएकाले इसापूर्व ५०० तिर ग्रिसमा ब्रेड बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न अन्नको पिठो सुकाएर ‘डिल्डो’ (पुरुषको कृत्रिम यौनांग) निर्माण गरी प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ । इसापूर्व १०० तिर इजिप्टकी रानी क्लियोपेट्राले पहिलोपटक भाइब्रेटर प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । लौका सुकाएर खाली गरी प्रयोग गरेका वेला आवाज निकाल्ने खालका ससाना वस्तु राख्न उनले आफ्ना सेवकलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
सन् ५०० तिर कृत्रिम यौनांगको विकासले निकै ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ । पुरुषको अण्डकोष आकारकै केही गिलो वस्तु डिल्डोमा अड्याउन थालियो । यसको प्रयोगले महिलाको यौनांग बाहिर बिस्तारै घर्षण पैदा गर्ने र यौन उत्तेजना वृद्धि गर्ने बताइएको सो प्रयासले आधुनिक सेक्स टोय निर्माणमा निकै सहयोग पुर्‍याएको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । सो अभ्यास जापानमा गरिएको थियो । यसलाई पछि ‘डम्ब बेल’ भन्न थालियो । मध्यकाल (सन् १००० को वरिपरिको समय) मा पाश्चात्य जगत्मा चर्च निकै शक्तिशाली थियो । कुनै प्रकारका यौनोत्तेजक तथा यौन सामग्री प्रयोग गर्नुलाई पाप गरेको मानिन्थ्यो । सन् १३६८ देखि सन् १६४४ को बीचमा चीनमा मिङ वंशको शासन रहेका वेला पुरुषको कृत्रिम यौनांग र ‘पेनिस रिङ’ (पुरुषको यौनांगमा राखिने रिङ) मा हात्तीका दारा तथा बहुमूल्य धातुको प्रयोग गरिएको इतिहास छ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा सेक्स टोयको निर्माण तथा प्रयोगले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । आधुनिक सेक्स टोय निर्माण हुन थालेको पनि यही समयबाट नै हो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा सेक्स टोय विद्युतीय उपकरण बन्न पुग्यो । थोमस एल्बा एडिसनले विद्युतीय बल्बको आविष्कार गरेपछि सेक्स टोयमा पनि विद्युत् प्रयोग हुन लामो समय लागेन । भाइब्रेटरलगायतका सेक्स टोयमा विद्युत् अपरिहार्य बन्न पुग्यो । अमेरिकी वैज्ञानिक जर्ज टेलरले सन् १८६९ मा वाष्प इन्जिनबाट सञ्चालित हुने भाइब्रेटर निर्माण गरेका थिए । उनले यसलाई म्यानिपुलेटर नाम दिएका थिए । यसपछि विभिन्न आकार–प्रकार र विशेषता भएका विभिन्न प्रकारका सेक्स टोय निर्माण हुने क्रमले गति लिएको देखिन्छ ।
सचेतना नअपनाए क्यान्सर हुन सक्छः
सेक्स टोयको प्रयोग पछिल्लो समयमा अत्यधिक हुन थालेको छ । सामान्य प्रयोगका लागि त कुनै फरक पार्दैन, तर ह्याबिट भयो या यसकै कारण रेगुलर काममै असर पर्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ समस्या सिर्जना हुन्छ । यसलाई निरन्तर गर्‍यो भने इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ । विज्ञसँग परामर्श गरेर यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
धादिङको गजुरीबाट १०५ केजी चरेससहित तीन पक्राउ
भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनि भन्छन्, सरकार र सीके राउत सम्झौताले ‘स्वतन्त्र मधेस’ लाई मान्यता दियो
चिट चोर्न यस्तो दिमाग लगाउनेले पढ्नमा दिमाग खर्चेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, हेर्नुस् ,त तरिका